warkii.com » Leeds United Oo Guux Ka Abuurtay Suuqa Iibka Ciyaartoyga, Xiddigaha Lala Xidhiidhinayo Iyo Jawaabta Ay Ka Bixiyeen Xiisaha Ibrahimovic
Leeds United Oo Guux Ka Abuurtay Suuqa Iibka Ciyaartoyga, Xiddigaha Lala Xidhiidhinayo Iyo Jawaabta Ay Ka Bixiyeen Xiisaha Ibrahimovic
Kooxda kubadda cagta Leeds United oo toddobaadkii hore usoo dallacday horyaalka Premier League oo ay muddo 16 sannadood ah ka maqnayd, waxay durba suuqyada iibka ciyaartoyda ka abuurtay guux iyo dhaqdhaqaaq.
Kooxdan ay sida adag u xafiiltamaan Manchester United oo taageereyaal tiro badan ku leh gudaha UK, waxa isasoo taraya ciyaartoyda ruug caddaaga ah ee lala xidhiidhinayo inay hormood u noqon doonaan xili ciyaareedka soo socda, waxaana ku jira laacibiin culculs oo dunida magac weyn ku leh.
Weeraryahanka reer Sweden ee Zlatan Ibrahimovic oo AC Milan ku qaadaya xili ciyaareed uu ku muujinayo in da’diisu 38 jirka gaadhay ay kaliya tiro tahay, ayaa kusoo baxay liiska ciyaartoyda la hadal hayo inay Elland Road tegi doonaan.
Sidoo kale ruug-caddaaga PSG ee Edinson Cavani oo uu ka dhamaaday qandaraaskiisu, si xor ahna ugu biiri karaya kooxda uu doono ayaa liiska kusoo baxay, halka tiro ciyaartooyo ah oo Premier League ka dheesha oo uu ka mid yahay James Milner ay usbuucii hore kusoo baxeen shaxda suurtogalka ah ee Leeds United ay ku ciyaari doonto.
Mulkiilaha Leeds United oo lagu magacaabo Andrea Radrizzani oo wax laga weydiiyey waxa ka jira wararka kooxdiisa ku xidhiidhinaya labadan ciyaartoy ayaa sheegay in ay adag tahay in Ibrahimovic uu yimaaddo Elland Road, laakiin Edinson Cavani ay jamaahiirtu filan karaan.
Andrea Radrizzani waxa uu ku adkaystay in waqti dambe ay tahay oo Ibrahimovic aanu waqtigan xammili karayn xamaasadda iyo cidhiidhiga horyaalka Premier League, dhhab ahaantiina ay ku adkaan doonto, laakiin waxa uu qiray in bishii January ay isku dayeen inay lasoo saxeexdaan ka hor intii aanu AC Milan tegin, waxaanu yidhi: “Xaqiiqdii way adag tahay Ibrahimovic. Waxaanu iskay daynay inaanu lasoo saxeexano bishii January laakiin wuxuu doortay inuu ku biiro Milan, heshiiskaana way u dhamaatay. Hadda waa waqti dambe, cadaadiska kubadda cagta Ingiriiskuna wuu ka duwan yahay.”
Laakiin Andrea Radrizzani, waxa uu albaabada u furay Cavani oo 33 jir ah, isla markaana xor ka noqday PSG oo xili ciyaareedkiisii ugu dambeeyey uu ku qaatay sannadkan, waxaanu yidhi: “Waxa tayadiisa sii dheer, Cavani wuxuu wax ku qaban karaa jidhkiisa, waanu la qabsan karaa halkan, laakiin waligay kalamaan hadal tababaraha.
“Sida aan idiin sheegay, waanu hubinaynaa, waanaynu arki doonaa maadaama uu waqtigan xor yahay oo suuqa laga heli karayo.”